UNHCR oo qaxootigii horeeyey ee ka laabanaya Kenya ka dejineysa Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Hay’adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa bilaabeysa iney dalka Soomaaliya dib ugu celiso qaxooti iskooda uu doortay iney ka guuraan Kenya oo ay muddo dheer ku noolaayeen.
Wakiilka hay’adda UNHCR ee Soomaaliya, Alessandara Morelli ayaa sheegtay in Isniinta soo socota (8-da December) ay magaalada Kismaayo ku celin doonaan qaxootigii ugu horreeyay ee ka guuraya xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya.
Ilaa 100 qoys ayay gaarayaan dadka dib loogu celinayo Kismaayo, sida uu sheegay hoggaamiye ku-xigeenka maamulka KMG ah ee Jubba, Cabduqaadir Xaaji Maxamuud oo maanta Kismaayo kula kulmay Alessandara Morelli.
Wakiilka UNHCR ayaa caddeysay inay billaabeen qorshe dib loogu celinayo dadka qaxootiga ah ee doonaya inay ku noqdaan dalkooda, waxayna xustay in qorshahaas oo hadda billow ah uu sii socon doono.
Heshiis saddex geesood ah oo 10-kii bishii November, 2013 ay magaalada Nairobi ku kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo hay’adda UNHCR ayaa lagu go’aamiyay inaan lagu khasbin qaxootiga Soomaalida ah ee Kenya ku nool inay dalkooda dib ugu noqdaan, balse loo fududeeyo ciddii iskeed u go’aansato dib u noqoshada.